Soomaali/Somali | Multicultural Cumbria
Hagaha koroonafayras (Covid19)
COVID-19 waa jiro cusub oo waxyeelayn karta sambabahaaga iyo hawo qaadashadaada. waxaa sababay fayrus la
Haddii aad leedahay:
• heerkulka sare – waxaad dareemeysaa kuleyl markaad taabato laabtaada ama dhabarkaaga
• qufac cusub, oo joogto ah – tan macnaheedu waa inaad dhowr jeer qufacday
waa in aad joogtaa guriga.
Mudo intee ah ayaa lagu joogayaa guriga?
• Qof kasta oo leh astaamaha waa inuu joogaa guriga ugu yaraan 7 maalmood.
• Haddii aad la nooshahay dad kale, waa inay joogaan guriga ugu yaraan 14 maalmood, si looga fogaado in
cudurka faafo bannaanka guriga.
• 14 maalmood ka dib, qof kasta oo aad la nooshahay oo aan lahayn astaamo ayaa ku noqon kara
howlahooda caadiga ah.
• Laakiin, haddii qof ka mid ah gurigaaga uu yeesho astaamo, waa inay guriga joogaan 7 maalmood laga
bilaabo maalinta astaamahoodu bilaabmeen. Xitaa haddii ay micnaheedu tahay inay guriga joogaan wax ka
badan 14 maalmood.
• Haddii aad la nooshahay qof 70 jir ah ama ka weyn, oo qaba xaalad dheer, uur leh ama leh nidaamka
daciifnimada jirka, isku day inaad u raadiso meel kale oo ay joogaan 14 maalmood.
• Haddii ay tahay inaad guriga wada joogtaan, iskuday inaad iska fogaataan sida ugu badan ee macquulka ah.
talo ku saabsan joogitaanka guriga
Ha aadin shaqada, dugsiga,
qaliinada GP, farmashiyaha ama
Isticmaal qalab gaar ah, ama nadiifi
Ka fogoow xiriir dhow inaad la
yeelato dadka kale
Ha laguu keeno cunto iyo
Ha yeelan soo booqdayaal Seexo keligaa, hadday macquul
Si joogto ah u dhaq gacmahaaga Cab biyo badan Qaado barastamol si uu kaaga
Goormaa ayaan la xiriiraa NHS 111?
• waxaad dareemeysaa xanuun daran oo aadan sameyn karin wax walba oo aad sameyn jirtay, sida
daawashada telefishanka, isticmaal taleefankaaga, aqriska ama sariirta inaad ka kacdo
• waxaad dareemi in aad la qabsan karin astaamahaagu ee guriga
• xaaladaadu weey sii xumaaneysaa
• astaamahaagu ma wanaagsanaanayaan 7 beri kadib
Sideen ula xiriirayaa NHS 111?
Waxaad isticmaali kartaa NHS 111 qadka adeega coronavirus si aad u ogaato waxa la sameeyo waxa ku xiga.
Haddii aadan isticmaali karin adeegyada qadka waxaad wici kartaa 111 (waa lambar bilaash ah oo la waco).
Waxaad weeydiisan kartaa turjubaan luuqadaada hooyo.
Maxaa dhacaya haddii aan ka walaacsanahay xaaladeyda socdaalka?
Dhamaan adeegyada NHS ee coronavirus waxay bilaash u yihiin cid kasta iyadoo aanan loo eegeynin sharciga
ay ku joogaan UK. Tani waxaa ku jirto baarista coronavirus iyo daaweynta, xitaa haddii natiijadu ay tahay ma
qabo. Isbitaalada NHS-ta waxaa lagula taliyay in aan baaritaano soogalootinimo looga baahneyn dadka qaata
baaritaanka ama daaweynta COVID-19.
Maxaan sameyn karaa oon ka caawiyo si loo joojiyo faafinta coronavirus?
• Hubi inaad dhaqdo gacmahaaga si joogto ah, adoo isticmaalaya saabuun iyo biyo, ugu yaraan 20
• Raac talo ku saabsan joogitaanka guriga
Taladani waxay ku saleysan tahay talobixinta caafimaadka iyo macluumaadka ee NHS waana talo dhammaan
dadka ku nool UK, iyadoon loo eegayn wadanka ay ka soo jeedaan. Macluumaad dheeri ah:
• Hagitaanka NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Werinta 2-aad [16.03.2020] / version 2 [16.03.2020]